I-pink brecciated mookaite yijasper ene-matrix efanelekileyo ye-lined - ividiyo
tags Kuqhawulwe, Mookaite, pinki
Thenga i-mookaite epinki yendalo kwivenkile yethu
Iparcciated mookaite yenziwe ngeeapiny ezimenyezelayo ezinemigca enqamlezayo ene-matrix efanelekileyo. Imatrix efumaneka kwi-mococococated mookaite ifunwa kakhulu emva koko inokunika ilitye elinemibala eyahlukeneyo ukusuka ku-mustardy yellow ukuya kwabelungu kunye nebala elikhanyayo.
Mookaite yijasper yaseOstreliya edibanisa imibala elula kakhulu etyheli kunye nejaspi ebomvu. Ikhuthaza umnqweno wamava amatsha kwaye inceda ukugcina ulungelelwaniso phakathi kwemisebenzi yangaphandle kunye nokuphendula kwangaphakathi kwezi. Inika ukuzola okunzulu ngelixa ikhuthaza ukuguquguquka kwezinto.
Mookaite Isigama ligama elenziweyo elingelolokwenyani, elibizwa ngokuba yiJasper yaseAustralia. I-Kennedy Ranges yeNtshona ye-Australia kunye nokwandiswa kufutshane ne-Mooka Creek yindawo, apho eli litye lafunyanwa laza laqanjwa khona. Le Jasper yaseAustralia inesibindi kunye nomhlaba obukekileyo ngokubonakala kweekristali zeMookaite. I-Mookaite Jasper ikwajongwa njengelitye elinamandla lokuphilisa eliqhagamshela umntu ngamandla ehlabathi. Eli litye le-aboriginal likwabizwa ngokuba lilitye likaMama woMhlaba, nelibaluleke kakhulu kwihlabathi liphela, kuba amandla alo okuphilisa anefuthe kunye nendawo yokunxibelelana namandla oMhlaba.
Iikristali ze-mookaite ezipinki zivela kwinani leentlobo ezifana neMookite, Moakite, Moukite, Mookalite, Mookerite, Mook okanye Mook Jasper, ngokwe Mooka Creek, eyaqala eli litye, Mookaite luhlobo oluchanekileyo.
Iparcciated mookaite epinki inokwaziswa njengomdibaniso we chert, opalite kunye chalcedony. Ukuchazwa kwayo ngokupheleleyo kuxhomekeke kubungakanani be-silica, ekhoyo kwinto. Ukuguga kancinci yenye yeempawu eziphambili zokuphilisa Mookaite amatye.
I-pink brecciated mookaite lilitye lamandla, kunye nokwenza izigqibo.
E-Australia, mookaite yayiselilitye elaphilisayo nelinika amandla. Kuthiwa ukukhusela umntu osinxibileyo kwiimeko ezinzima kunye nokusidibanisa nabantu esibathandayo abaswelekileyo. Kukholelwa ukusingenisa "apha kwaye ngoku," ukunceda ngokuvavanywa kwengxaki kunye nokwenza izigqibo.
Ukucamngca kunye mookaite jasper yonyusa ukuguquguquka kunye nokukwazi kwakho ukubona izisombululo ezininzi kuyo nayiphi na ingxaki.
I-Brecciated mookaite ihlala isetyenziselwa ukunyanga ukuphazamiseka kwesisu okanye isisu, i-hernias, ukuqhuma kunye nokugcinwa kwamanzi, kunye nabathandi beyoga bayisebenzisa ukulinganisela nokuvula eyokuqala, yesibini neyesithathu.
Iparcciated mookaite, evela e-Australia
tags yihakinto, pinki, Pink opal
tags leyaspisi, Mookaite
tags pinki, Zircon
tags Kuqhawulwe, Mookaite